Disneyland Ezumike Na Paris N'oge oyi na okpomọkụ | Save A Train
Home > Train Travel France > Disneyland Ezumike Na Paris N'oge oyi na okpomọkụ
Disneyland Paris bụ mgbe mbụ mba Disney Park maka ọtụtụ Fans ileta. Ị chọrọ ịma otú ka atụmatụ ndị kasị mma Disneyland ezumike na Paris n'oge oyi na okpomọkụ? Mgbe ahụ ị na-na na-abịa nri ebe! Dị na Marne-la-Vallee, a esịt Paris, Disneyland Paris bụ banyere 45 nkeji site n'etiti obodo ụgbọ okporo ígwè. The dum eme mejupụtara 7 ukara Disney-themed hotels, ọtụtụ onye hotels, na Disney Village ntụrụndụ na shopping district, na abụọ ogige: Parc Disneyland na Walt Disney Studios Park. Obi tọrọ ya ụtọ ileta? Ebe a anyị na-eso ụfọdụ anyị kacha mma Atụmatụ maka enwe a oyi ụbọchị ma ọ bụ okpomọkụ ezumike na Disneyland Paris.
Ọ bụrụ na ị na-eleta Europe maka oge mbụ, gịnị mere na-ele anyị ndepụta nke ihe i nwere ike na-atụ uche ma ọ bụrụ na ị na-eleta Europe: EBE A
Adịbeghị anya News About Disneyland Ezumike na Paris N'oge Winter na Summer
Disneyland Paris na-achọ mma! Nke a bụ a ndu na otú ka atụmatụ ndị kasị mma Disneyland ezumike na Paris n'oge oyi na okpomọkụ, ma ọ bụ n'eziokwu ịtụnanya na ọ bụla oge. na nso nso, ekele na nnukwu ọnụ ọgụgụ refurbishments tupu Disney Paris ncheta, ukwuu nke ogige e weghachiri eweghachi akpasarade ịma mma. The ememe onwe ya kwusiri, ma na e nwere ihe ka ozi ọma. Ọtụtụ n'ime ndị ọhụrụ ntụrụndụ na-na-anọ! Yay! Ọ ga-ga-n'ihu gbakwunyere na Halloween na Christmas ntụrụndụ site na njedebe nke afọ.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere ịga n'isi 2019, na Akụkọ Ifo nke Force Star Wars omume na-agba ọsọ January 12 na March 17, 2019, na My Chemical Romance & Eze Festival ga-ebe January 19 na March 17, 2019. Mgbe nke ahụ mechara, Iju Season nke Super-Heroes ga-agba ọsọ si March 23 na June 16, 2019, na Lion King na Jungle Festival ga-eme July na September 2019, sotere Halloween na Christmas oge.
Ọdụ ụgbọ elu nke Lyon gaa na Disneyland Marne-la-Vallee
MGBE kwesịrị ị gara Disneyland Paris?
Ọ bụrụ na ị na-na na a ogologo oge planner na ị chọrọ ịbụ n'ụzọ zuru ezu kwadebere maka gị Disneyland ezumike na Paris n'oge oyi na okpomọkụ, mgbe ahụ, a info ga-eme ka ị na-amụmụ ọnụ ọchị. Disneyland Paris a mara ọkwa ya ogologo oge atụmatụ na-agụnye iju, Star Wars, na friji dị ka akụkụ nke a $2.5 ijeri revitalization na Walt Disney Studios Park.
Nke a multi-afọ redevelopment nke Walt Disney Studios Park ga tụgharịa na n'ụzọ malite na 2021. ọbụna mgbe, ọ bụ ukwuu kwesiri na nta ọcha ga mpụta mbụ na mbụ ọgwụgwụ nke na nso. Otutu na mgbasa ahụ ga-ebi n'ihu nke Paris 2024 Summer Olympics.
The Hague na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Maastricht na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
Cologne na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Frankfurt na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
The weather na Paris gburugburu March /April, na September site November bụ oyi, ma anyị na-enweta ya! Ndị a bụ ndị kasị ọnọdụ ugboro nke afọ, na ọ bụ ezie na ọ nwere ike snow na oyi, ọ gaghịzi oke oyi ke ufọt ufọt November. (Mid-to-mbubreyo December nwere ike ịkwa ya gị chioma, ezie na.)
Disneyland Paris ke Christmas
enweghị ajụjụ, ndị kasị na-atọ ọchị oge gara Disneyland Paris bụ Christmas-nri gburugburu ufọt ufọt November mgbe ọ na-amalite. A, Disney si enchanted Christmas na-agba site na mmalite November site n'oge January. Ọ bụ ihe magburu onwe oge gara Disneyland Paris maka ụfọdụ ndị ọzọ na n'oge a kara aka ntụrụndụ, na maka mara mma decorations gburugburu ogige. Plus, ị nwere ike ghara iti ndị obi na-adị nke City of Paris n'oge ezumike ọnwa.
Stuttgart na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Geneva na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
Marseille na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Luxemburg na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
OTÚ ọtụtụ ụbọchị Disneyland Ezumike na Paris N'oge Winter na Summer?
Ọ bụrụ na ị na-a oke ofufe, otu ụbọchị na-ndinyanade mbịne ya. Anyị na-atụ gị nwere ezi na-agba ọsọ ụkwụ! kwesịrị, ị chọrọ 3 ụbọchị na Disneyland Paris. E nwere ihe a ọtụtụ inyocha na Parc Disneyland, na ogige bụ incredibly zuru ezu, ka na-eme atụmatụ na allocating 2 ma ọ bụ 2.5 ụbọchị n'ihi na ogige bụ gị mma nzọ.
Ọtụtụ ndị nwere ike mezuo Walt Disney Studios park na ọkara a ụbọchị ma ọ bụ a ụbọchị. E nwere ihe agwaogwa nke na-atọ ụtọ na-adọrọ mmasị Ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-naanị otu ụbọchị ahụmahụ Disneyland Paris, ikwu na Studios na dị nnọọ ime Disneyland park.
Winter 2019/2020: Book Early na Save
Ele All Enyele
Buru ụzọ mee atụmatụ na-azọpụta, na nke kacha mma e on Winter 2019/2020 na mbata site na 7nke November 2019 ka 1st April 2020. Hazie gị nrọ ezumike tupu!
Nweta Up na 25% Off gị Hotel & Park Ticket ngwugwu *
Free Ọkara Board **
maka dum ogologo nke ọnụnọ gị ma ọ bụrụ na ị na-anọ na a Disney Hotel ma ọ bụ na Disney si Davy Crockett Ranch.
Free Breakfast na Lunch ma ọ bụ Nri abalị ***
mgbe gị na ụbọchị abụọ na Disney Parks ma ọ bụrụ na ị na-anọ na Les obodo ntà Nature Paris.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-abata na a dị iche iche oge, biko niile ha ugbu a na-enye ebe a.
Kacha mma agafe AT Disneyland Ezumike na Paris N'oge Winter na Summer
Nke a bụ ihe anyị chere na ị ga-ebu ụzọ mezie mgbe ị gara Disneyland Park. Ụfọdụ n'ime ha ga-ada maara ma ọ bụrụ na ị na na na na American ogige, ma e nwere ndị na-emekarị ezu iche (ma inexperience ma ọ bụ aesthetic) mee Paris si nsụgharị na-eche ihe pụrụ iche. Na nke kacha mma na-agba ịnyịnya ebe a bụ ezi onye-nke-a-ụdị mma na-eme classic Disney aghụghọ na a bewitching ọhụrụ akụkọ-akara.
Amsterdam na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Antwerp na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
Rotterdam na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Strasbourg na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
10. Indiana Jones et le Temple du nsogbu-Indiana Jones na Temple nke ize ndụ
8. Alice na Kemmasi Labyrinth
5. The Taniere Dragon-The Dragon si ọgba
4. Ọ bụ a Obere World
3. Big Égbè Eluigwe Mountain
2. My Chemical Romance nke Caribbean
Njikere maka Disneyland Ezumike na Paris N'oge Winter na Summer na kasị mara mma version of Disneyland na ụwa? Na-awụlikwa elu on a ịzụ ka Paris na-enyemaka nke SaveATrain Enweghị ụgwọ ọrụ kachasị elu, nke pụtara ọzọ ego maka agafe! AKWỤKWỌ a tiketi nkeji.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/disneyland-vacation-paris/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#disneyinsummer #nkwanye ugwu #DisneyParis disneyland disneywinter europetravel Ezinaụlọ trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelfrance gaa disney